Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1622
Hitsidika eto amintsika, ny asabotsy izao, ny sekretera lefitra amerikanina misahana ny raharaha afrikanina, Linda Thomas-Greenfield. Anisan’ny handray azy amin’izany ny filoha Rajaonarimampianina sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice. Hatao ani, eny Alarobia, ny famindram-pitantanana eo amin’ny filohan’ny Cenit, Ralaiariliva Mamy, sy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery. Tombanana fa hanan-kambara momba ny fifidianana rehetra […]
Fiaraha-miasa amin’ny UA : tonga hanombana ny fifidianana i Lakhdar B.
Noraisin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Atallah Béatrice, tetsy Anosy omaly, ny Vondron’ireo olon-kendry eo anivon’ny Vondrona afrikanina (UA), notarihin’i Lakhdar Brahimi. Tafiditra amin’ny tomban’ny fifidianana teto amintsika sy ny fametrahana fitoniana izao fahatongavan’izy ireo eto izao. « Efa nampahafantarin’ny minisitra anay ny toe-draharaha amin’izao fotoana izao. Hoentina any amin’ny fivorian’ny UA, ny faran’ny volana izao, izany », hoy […]
Toerana avo : tsy lonaka sy tsy mamokatra ny tany
Na maro tsy mahatsikaritra aza, nilaza ny teknisianina avy amin’ny Foibe misahana ny fikarohana amin’ny fambolena (Fofifa), fa tsy mamokatra loatra ny tany aty afovoan-tany sy toerana avo. Antony, kivatovatoana ny tany ary lasa any amin’ny morontsiraka sy ny lemaka ny tsiron’ny tany. Tsy mahagaga noho izany raha mamokatra kokoa any amin’ny toerana midadasika sy […]
« Précédent 1 … 1 620 1 621 1 622 1 623 1 624 … 1 626 Suivant »